बाछिटा के हाे ? कसरी लेखिन्छ ? | साहित्यपोस्ट
थोरै समयमा थोरै अध्ययनबाट धेरै ग्रहण गरिने स–साना स्वरूपका रचना सृजना गर्ने सन्दर्भमा एलाक, छोक, छेस्का, झिल्का, कृमुक, झर, दानाकविता, सूत्रकविता, बिम्बकविता, बीजकविता र बाछिटाजस्ता लघुतम र सूक्ष्म स्वरूपका काव्यिक उपविधाहरू प्रादुर्भाव भएका हुन् ।
प्रकाशित ८ चैत्र २०७७ १४:०१
बाछिटा काव्यको नवीनतम उपविधा हो । कविताभन्दा भिन्न संरचना, स्वरूप र आयामका आधारमा यसलाई उपविधा मानिएको हो । बाछिटाको आकार र आयाम लघुतम र प्रस्तुति प्रतीकात्मक वा वक्रोक्तिपूर्ण रहने गर्छ । त्यसैले सुन्दर बाछिटा सृजनाका निम्ति गम्भीर चिन्तन र निरन्तर साधनाको आवश्यकता पर्छ । सैद्धान्तिक अवधारणाको परिकल्पना निर्माण, बाछिटा नामकरण र काव्यिक उपविधाको रूपमा प्रवर्तनको विधिवत् घोषणा विक्रम संवत् २०७७ साल जेठ ४ गते अमर त्यागीले अमेरिकाबाट गरेका हुन् । यस घोषणामा खगेन्द्र बस्यालले नेपालबाट साथसहयोग दिएर महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
धुलो टक्टक्याएर उठेकाहरू
आमाको तासफोटो: परदेशबाट घरदेश चिहाउने आँखीझ्याल